Amaxabiso ethu ukutshintsha ngokuxhomekeke kumatshini loqwalaselo kwaye kwanikwa factor emarikeni. Siya kuthumela kuwe uluhlu lwamaxabiso oluhlaziyiweyo emva kokuqinisekisa uqwalaselo ezifanelekileyo umatshini wena kunye nekoteyishini luyasebenza ngenyanga enye.
Uyakwazi ukwenza intlawulo kwi-akhawunti yethu yebhanki, Western Union okanye PayPal: sales@omni-cnc.com.
CNC umzila-ngokupheleleyo kwiinyanga ezili-12 emva kwisiseko iwaranti kwi umzila abenzi cnc ezifanelekileyo warranty kwi 3rd ukufaka add. Oku kuquka iindawo zombane kunye mechanical phantsi 'ukusetyenziswa oqhelekileyo'.
Laser Machine-ngokupheleleyo kwiinyanga ezili-12 emva kwisiseko iwaranti kwi kumatshini laser kunye nabavelisi ezifanelekileyo warrty kwi 3rd udibanise izinye ngaphandle consumable iindawo. Warranty for laser ityhubhu Reci brand: kweenyanga ezi-6, Lens & Mirror: iinyanga ezi-3.
CNC Plasma Machine-ngokupheleleyo iinyanga 12 ebuyela iwaranti nefanele silwenza warraty kwi 3rd udibanise izinye ngaphandle consumable iindawo. Ezifana: umlomo, electrode, ukhuseleko cap njl
Iindleko yokuthumela kuxhomekeka kwindlela okhetha ukufumana impahla. Express ngokwesiqhelo eyeyona ngokukhawuleza kakhulu kodwa ndlela kuyabiza kakhulu, ofanelekileyo kuphela laser mini okanye umzila. Yi seafreight yeyona simse kumatshini umzila cnc okanye laser, umatshini plasma. Ngqo amazinga zezomoya singakwazi ukucaphula kuphela emva eqinisekisa imodeli umatshini, yaye le quote frieignt kwakhona kusebenza kuphela ngenyanga enye.